Ị na-ekere òkè Open Review nke Bit site Bit: Social Research na Digital Age. N'oge Open Review i nwere ike ịgụ akwụkwọ na aka mee ka ọ ka mma. Ị nwere ike ịtụ aro site anam annotations iji hypothes.is , na-emeghe iyi annotation usoro. Ọzọkwa, website a ga-achịkọta gị isịne nzaghachi site nsuso nagu na gbahapụrụ ọnụego nkebi nke ọ bụla nke akwụkwọ.
Open Review ga-ebe mgbe akwụkwọ a si nkwusa, Princeton University Press, na-eduzi ndị ọgbọ nyochaa. The nzaghachi si Open Review na ndị ọgbọ nyochaa ga-eji ike a adi odide. The Open Review oge ga-akwụsị mgbe ikpeazụ odide ahụ bụ rubere Princeton University Press, nke ga-eleghị anya na November 2016.
FAQ banyere emeghe review
Olee ụdị nzaghachi unu na-achọ?
Open Review bụghị naanị banyere akụta typos. Kama nke ahụ, Open Review e mere na-anakọta niile iche nke nzaghachi, na m ga karịsịa ịnabata ọ bụla nzaghachi na i nwere banyere isi ihe dị na akwụkwọ. Enwere ngalaba na ị na-ahụ karịsịa mgbagwoju anya? Ihe ha na isi ihe ndị ị na-ahụ mkpa karịsịa? M na-eme ka a na-ekwu na ị na-eche mkpa ka a nụchaa? Enwere akụkụ ụfọdụ nke akwụkwọ na ị na-eche ga-ewepụ? Mgbe i na-ejighị, m chere na i kwesịrị iso otu n'ime ndị isi ụkpụrụ na Wikipedia: Kaa obi .
Enwere m ike ịhụ annotations na ndị ọzọ na-eme?
Ee, niile annotations bụ ọha. Ị pụrụ ịhụ ha na aka-nri-n'akụkụ nke ọ bụla na peeji ma ọ bụ i nwere ike na-agụ ha na iyi ụdị .
Olee uru n'ihi na ndị na-agụ?
Ị ga-esi na-agụ ihe odide ahụ na aka mee ka ọ ka mma.
Olee uru n'ihi na ndị dere na nkwusa?
The Open Review usoro ga-erite uru ma-ede akwụkwọ na-ebipụta, ọbụna ma ọ bụrụ na ha enweghị mmasị amụba ohere ihe ọmụma. The usoro ga-eduga elu odide àgwà site na n'ezoghị na isịne nzaghachi. Ọzọkwa, Open Review usoro ga-enye ndị bara data na ike ga-eji n'oge na ahịa nke akwụkwọ.
Gịnị bụ Mee usoro maka nke a website?
Anyị ga-eme a zuru blog post banyere nke ahụ n'ọdịnihu. N'ihi na ugbu a, ị nwere ike ịgụ ihe banyere anyị na koodu .
Onye ọ bụla mgbe mere ihe dị ka nke a n'ihu?
M n'aka na ha nwere. Lee ụfọdụ yitụrụ oru ngo na m na nụrụ banyere:
Hadley Wickham yiri iji ụfọdụ nke ya akwụkwọ kpamkpam na-emeghe, ọ bụ ezie na m na mgbe hụrụ ya dee ihe ọ bụla banyere ya.
Lawrence Lessig si Code 2.0 e dere na akụkụ on a UK.
Otu akwụkwọ n'ezie sitere n'ike mmụọ nsọ m ka m na-agbalị nke a bụ Michael Nielsen akwụkwọ Reinventing Discovery . Na, o yiri ka ọ na-etinye ya akwụkwọ ọhụrụ on miri emi mmụta site a yiri usoro.
Kathleen Fitzpatrick mere ihe yiri nke ahụ n'akwụkwọ ya Planned-abakwaghị uru: Publishing, Technology, na Future nke Academy .
Ọ bụrụ na e nwere ihe ndị ọzọ yiri oru ngo na m na Agbaghara, biko, ka anyị mara na anyị ga na tinye njikọ. Anyị email address bụ info@bitbybitbook.com .
Olee ụdị ozi ị na-achịkọta na otú ga na ozi a ga-eji?
Biko gụọ anyị nzuzo na nkwenye iwu .
Olee otú m nwere ike ịmụta ihe banyere omenala ndị ọgbọ nyochaa nke agụmakwụkwọ akwụkwọ?
The AAUP bipụtara na nso nso a akụkọ on mma omume maka ọgbọ review .
Enwere m ike ime nke a na m akwụkwọ?
N'aka. Lelee koodu ngalaba nke a website maka ihe banyere otú anyị si mee ya.
M nwere a dị iche iche ajụjụ banyere Open Review. Olee otú m pụrụ inwe na aka?
Zigara ozi- info@bitbybitbook.com .